को हुन् यी का’मुक युवती ? जो रातारात भाइरल बनिन् ! हेर्नुहोस् ९ तस्बिर !
पछिल्लाे समय सामाजिक संजालमा भाइरल बनेका यी तस्विरले हं’गामा मचाएकाे छ । सामाजिक संजाल भनेकाे यस्तो चिज हो जसको माध्यम द्वारा मानिसलाई कति बेला भाइरल बनाइदिन्छ थाहै हुदैन पछिल्लो समय सामाजिक संजालहरुमा भाइरल हुने को क्रम बढिरहेको छ भने भाइरल हुन अनेक ह’र्कत समेफगर्न थालेका छन् ।
मानिसमा सुन्दरता र आफु संग केहि खास छ भने सामाजिक संजाल मा हिट हुन समय लाग्दैन सामाजिक संजाल मा भाइरल बनेर बजार मा जम्न खोज्ने धेरै छन् तर चाहेको बेला रातारात हिट हुन खोज्ने हरु पनि यो मा’मिला मा सफल बनेका छन् !
यसै क्रममा अहिले यी भारतीय युवती सामाजिक संजाल हरु फेसबुक, इन्स्टाग्राम हरुमा मि शेर्नि नामको आइडी मा आफ्नो भल्ग*र तस्बिरहरु सेयर गरेर भाइरल बनेकी छिन !
उनले दिनहुँ जसो समाजिक संजालमा आफ्ना ह’ट तस्बिर पोष्ट गर्ने गर्छिन् । पुरा परिचय नखुलाएपनि उनी मोडेल रहेको प्रतिक्रियाहरु आएका छन् । अहिले यी तस्विर निकै भाइरल भएकाे छ ।
हेर्नुहोस उनका ह’ट तस्बिर :
‘लभ डायरिज’ गीत: रुविना बिना सुशीलको जीवन अधुरो
‘लभ डायरिज’ २ फागुनबाट प्रदर्शनमा आउने फिल्म हो । फिल्मको प्रदर्शन मिति नजिकिदै गर्दा निर्माण युनिटले ‘अधुरो लाग्छ मेरो जीवन’ बोलको रोमा’न्टिक गीत समेत सार्वजनिक गरेको छ । मानस विक्रम थापाको शब्द, प्रविन पौडेलको संगीत र प्रताप दास र प्रविशा अधिकारीको स्वर रहेको गीतमा निर्देशक सौरभ चौधरीकै कोरियोग्राफी छ ।
गीतमा फिल्मका कलाकार सुशील श्रेष्ठ, विश्वजित रिमाल र रुविना थापाको अभिनय देख्न सकिन्छ । सौरभ चौधरीको निर्देशन रहेको फिल्ममा सुशील, रुविना र विश्वजितका अलावा बिष्णु सापकोटा, अर्जुनजंग शाही, विशाल पहारी लगायतका कलाकारको अभिनय छ ।
सञ्जय लामाको छायाँकन रहेको फिल्मका निर्माता विनोद सापकोटा हुन् । मिलन श्रेष्ठ र दिर्घ खड्काको सम्पादन फिलममा छ । युवायुवती बीचको माया प्रेम र कमेडीलाई फिल्ममा देख्न सकिने निर्देशक चौधरी बताए ।